Uloliwe + Umoya: I-Air France iqinisekisa ukuzibophelela kuzinzo kwindalo esingqongileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Uloliwe + Umoya: I-Air France iqinisekisa ukuzibophelela kuzinzo kwindalo esingqongileyo
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Utyalo mali • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Xanduva • Technology • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Njengabakhweli ngokuya befuna ngakumbi iindlela zokhenketho ezinobungqongileyo, iAir France ikhusela ingeniso yayo yexesha elizayo ngokumisela izisombululo ezinentsingiselo.
I-Air France iyayandisa inkqubo yayo 'yoQeqesho + yoMoya'.
Ukwandiswa kweAir France kubalaselisa amanyathelo abalulekileyo athathwa ngumphathi ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni.
I-Air France izibophelele ekunciphiseni ukukhutshwa kweenqwelomoya zasekhaya ngama-50% nge-2025 ukusuka kumanqanaba e-2019.
Ulwandiso lwamva nje lwe Air FranceInkqubo 'yoQeqesho + yoMoya' ibonakalisa ukuzibophelela kwayo ekuzinzeni okusingqongileyo. Njengokuba abakhweli besanda ngokufuna iindlela zokhenketho ezinobungozi kokusingqongileyo, inqwelo moya iyayikhusela ingeniso yayo yexesha elizayo ngokumisela izisombululo ezinentsingiselo.
Nangona ingesilo iskimu esitsha, ukwandiswa kweAir France kugxininisa amanyathelo abalulekileyo athathwa ngumphathi ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni. I-Air France izibophelele ekunciphiseni ukukhutshwa kweenqwelomoya zasekhaya ngama-50% nge-2025 ukusuka kumanqanaba e-2019 kwaye la manyathelo abalulekile ekufezekiseni oku. Iindlela ezisixhenxe ezongeziweyo zongezwa kwaye ezili-18 ngoku zinokubhukishwa. Ukunikezela ngetikiti elinye, amanqaku okunyaniseka, kunye nokukhuselwa koqhagamshelo, inqwelomoya yenze inkqubo enobungqongileyo ukuba inomdla kakhulu kubagibeli, ngelixa isenza umsebenzi wothutho oluphakathi ulungele ikamva.
Abahambi baya ngokuya bechatshazelwa yindlela imveliso okanye inkonzo enobume bendalo esingqongileyo. Uphando lwabathengi lwe-Q1 2021 luveze ukuba i-76% yabaphenduli behlabathi 'bahlala', 'bahlala', okanye 'ngamanye amaxesha' bephenjelelwa yile nto, bekhuphukela kuma-78% phakathi kwabaphenduli baseFrance.
Air France uvumile ukwanda okunokwenzeka ukuba abakhweli batshintshele kwezinye iindlela zokuhamba ezinobungozi kokusingqongileyo kwiindlela ezimfutshane zokuhamba, ngakumbi umzila kaloliwe, ngenxa yokuba intshukumo yeentloni zokuhamba ngenqwelomoya iye yanamandla kwiYurophu iphela. Esi sicwangciso sikhokelayo kushishino siza kuhlawula igalelo ekukhuseleni umfanekiso wesithwali seminyaka ezayo, ngelixa sinciphisa umsebenzi waso wokubhabha.
Iindlela ezininzi zokuthwala abantu ixesha elide zixhomekeke ekutyeni kwasekhaya kwizikhululo zeenqwelo moya, kwaye esi sikimu siqinisekisa ukuba asiphulukani naba bakhweli bafuneka kakhulu. Ngokusebenza ngokukuko kumxholo wokuzinza, umphathi uya kuseka ubukho obuqinileyo kule meko phambi kwabakhuphisana nayo kwaye unokuba ngumqhubi wezothutho phakathi kweFrance.
Ukuhamba ngololiwe yayilolona khetho lwesibini luthandwayo kwezothutho, ngasemva kwendlela, kuhambo lwasekhaya ngaphakathi eFrance ngo-2019 olusetyenziselwa i-17.4% (29.3 yezigidi) yeehambo. Kuqikelelwa ukuba ngo-2025 kaloliwe uza kuthatha i-18% yohambo lwasekhaya, iyonke eyi-31.4 yezigidi zeehambo.
Ukuhamba ngololiwe kuye kwafumana ukuthandwa kutshanje, kwaye kuthungelwano olukhawulezayo olubanzi eFrance, isetelwe ukuba idume ngakumbi. Nentengiso emfutshane enokuthabatha eyona nto ibalulekileyo kule minyaka izayo, ngakumbi xa urhulumente waseFrance ethatha amanyathelo kwiindlela ezithile zasekhaya, esi sicwangciso sobuchule siza kuqinisekisa ukuba iAir France ijongwa njengenkokeli yezothutho. Ukwandiswa kwenkqubo yeAir France 'yoLoliwe' oMoya kuqinisa ngakumbi amanyathelo athatyathwa yinqwelomoya ukuba ibe nobuntu kwindalo esingqongileyo, ngelixa ivumela inkampani ukuba ibonwe njengeziko eliqhubela phambili elinomdla wokwenene ngozinzo.